ဘာနဗြေူးမှာ ပရိသတျကို ဖြျောဖွမှေုအပွညျ့ပေးစှမျးနိုငျခဲ့တဲ့ပှဲဖွဈပွီး ဧညျ့သညျပီအကျဈဂြီက ပှဲပွီးခါနီးမှာ ခပြေဂိုးတှေ ဆကျတိုကျသှငျးယူကာ ရီးရဲလျကို ၂-၂ ဂိုးသရကေစားနိုငျခဲ့သလို ၂သငျးစလုံးလညျး ၁၆သငျးရှုံးထှကျအဆငျ့ကို အုပျစုပထမ၊ အုပျစုဒုတိယအဖွဈ အသီးသီးတကျရောကျသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ရီးရဲလျဟာ အစောပိုငျးမှာ ဘရုဂကျြက ဂါလာတာစာရေးနဲ့ ၁-၁ ဂိုးသရကေသြှားလို့ ပှဲမကနျခငျကတညျးက နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ သခြောသှားခဲ့တာဖွဈပွီး အုပျစုပထမနရောမြှျောလငျ့ခကျြအတှကျ အားကုနျကွိုးစားကစားခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီအတှကျကွောငျ့ပဲ ဘနျဇီးမားက ပှဲခြိနျ ၁၇မိနဈနဲ့ ၇၉ မိနဈတှမှော ဦးဆောငျဂိုးတှအေသီးသီးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ပှဲခြိနျ ၈၁ မိနဈမှာ ဘာပကေ ရီးရဲလျခံစဈရဲ့အမှားကနေ ပထမခပြေဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့သလို နောကျ ၂မိနဈအကွာမှာလညျး ဆာရာဘီးယားက လှပတဲ့ဒုတိယမွောကျခပြေဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
နာကငျြအခြိနျပိုမှာ ဂါရတျဘေးလျရဲ့ဖရီးကဈကနျသှငျးခကျြ တိုငျထိထှကျသှားခဲ့လို့ ရီးရဲလျလညျး နဈနာခဲ့ရပွီး ဒီပှဲမှာ သရကေစားနိုငျခဲ့တဲ့ ပီအကျဈဂြီလညျး အုပျစုနောကျဆုံးပှဲမတိုငျခငျမှာပဲ အုပျစုပထမရဖို့ သခြောသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီပှဲမှာ VAR ကွောငျ့ ရီးရဲလျဂိုးသမား ကျောတှိုကျဈ အထုတျမခံခဲ့ရတာလုိ့ ဆိုနိုငျပမေယျ့ ခွစှေမျးပိုငျးအရကွညျ့ရငျတော့ မတျလက ရီးရဲလျနညျးပွအဖွဈ ဇီဒနျး ပွနျလညျတာဝနျယူပွီးနောကျ ရီးရဲလျရဲ့အကောငျးဆုံးပှဲဖွဈခဲ့ပွီး ပွိုငျဘကျဂိုးသမားနာဗကျဈကွောငျ့သာ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးခဲ့ရတာလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီက ရီးရဲလျကနေ ပီအကျဈဂြီကို ပွောငျးရှသှေ့ားတဲ့ကျောစတာရီကာလကျရှေးစငျ နာဗကျဈဟာ ဒီပှဲမှာ အထူးလကျစှမျးပွနိုငျခဲ့ပွီး ဂိုးပေါကျကာကှယျမှု ၁၀ကွိမျအထိ ပွုလုပျသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပှဲခြိနျ ၁၇မိနဈမှာ အစ်စကိုရဲ့ကနျသှငျးခကျြ တိုငျထိထှကျလာတာကို ဘနျဇီးမားက ပိတျသှငျးကာ ဦးဆောငျဂိုးရယူနိုငျခဲ့ပွီး ညာနောကျခံလူ ကာဗာဂယျြရဲ့ကနျသှငျးခကျြ ၃ကွိမျနဲ့ တိုနီခရူးဈရဲ့အဝေးကနျခကျြ ၂ကွိမျအပါအဝငျ ရီးရဲလျရဲ့ထိုးဖောကျကနျသှငျးမှုတှကေို နာဗကျဈ လကျစှမျးပွကာကှယျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
That Madrid PSG game was great. Butadefensive mistake between Courtois and Varane meant that Real threw away the three points. Unlucky that Bale didn’t win them the game with the free kick. pic.twitter.com/lyp6lqkzNX
— Laca (@Lacazette_) November 26, 2019
ပထမပိုငျးပွီးခါနီးမှာ တဈယောကျတညျး ထိုးဖောကျလာတဲ့ပီအကျဈဂြီတိုကျစဈမှူး အီကာဒီကို ရီးရဲလျဂိုးသမားကျောတှိုကျဈ တားဆီးပုံကွမျးတမျးတယျဆိုပွီး ကှငျးလယျဒိုငျက တိုကျရိုကျအနီကတျပွသခဲ့ပမေယျ့ VAR ပွနျကွညျ့ခဲ့ပွီးနောကျ အနီကတျကနေ အဝါကတျပွဈဒဏျသာ ပွောငျးလဲခမြှတျခဲ့ပါတယျ။
ဘာနေဗျူးမှာ ချေပဂိုးတွေ ဆက်တိုက်သွင်းပြီး အုပ်စုပထမရဖို့ သေချာသွားတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ (ရီးရဲလ် ၂-၂ ပီအက်စ်ဂျီ ပွဲပြီးမြင်ကွင်းကျယ်)
ဘာနေဗျူးမှာ ပရိသတ်ကို ဖျော်ဖြေမှုအပြည့်ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်ပီအက်စ်ဂျီက ပွဲပြီးခါနီးမှာ ချေပဂိုးတွေ ဆက်တိုက်သွင်းယူကာ ရီးရဲလ်ကို ၂-၂ ဂိုးသရေကစားနိုင်ခဲ့သလို ၂သင်းစလုံးလည်း ၁၆သင်းရှုံးထွက်အဆင့်ကို အုပ်စုပထမ၊ အုပ်စုဒုတိယအဖြစ် အသီးသီးတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရီးရဲလ်ဟာ အစောပိုင်းမှာ ဘရုဂျက်က ဂါလာတာစာရေးနဲ့ ၁-၁ ဂိုးသရေကျသွားလို့ ပွဲမကန်ခင်ကတည်းက နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ သေချာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အုပ်စုပထမနေရာမျှော်လင့်ချက်အတွက် အားကုန်ကြိုးစားကစားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ ဘန်ဇီးမားက ပွဲချိန် ၁၇မိနစ်နဲ့ ၇၉ မိနစ်တွေမှာ ဦးဆောင်ဂိုးတွေအသီးသီးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပွဲချိန် ၈၁ မိနစ်မှာ ဘာပေက ရီးရဲလ်ခံစစ်ရဲ့အမှားကနေ ပထမချေပဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို နောက် ၂မိနစ်အကြာမှာလည်း ဆာရာဘီးယားက လှပတဲ့ဒုတိယမြောက်ချေပဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နာကျင်အချိန်ပိုမှာ ဂါရတ်ဘေးလ်ရဲ့ဖရီးကစ်ကန်သွင်းချက် တိုင်ထိထွက်သွားခဲ့လို့ ရီးရဲလ်လည်း နစ်နာခဲ့ရပြီး ဒီပွဲမှာ သရေကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ပီအက်စ်ဂျီလည်း အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲ အုပ်စုပထမရဖို့ သေချာသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ VAR ကြောင့် ရီးရဲလ်ဂိုးသမား ကော်တွိုက်စ် အထုတ်မခံခဲ့ရတာလုိ့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ခြေစွမ်းပိုင်းအရကြည့်ရင်တော့ မတ်လက ရီးရဲလ်နည်းပြအဖြစ် ဇီဒန်း ပြန်လည်တာဝန်ယူပြီးနောက် ရီးရဲလ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်ဂိုးသမားနာဗက်စ်ကြောင့်သာ နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့ရတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက ရီးရဲလ်ကနေ ပီအက်စ်ဂျီကို ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ကော်စတာရီကာလက်ရွေးစင် နာဗက်စ်ဟာ ဒီပွဲမှာ အထူးလက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးပေါက်ကာကွယ်မှု ၁၀ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၁၇မိနစ်မှာ အစ္စကိုရဲ့ကန်သွင်းချက် တိုင်ထိထွက်လာတာကို ဘန်ဇီးမားက ပိတ်သွင်းကာ ဦးဆောင်ဂိုးရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ညာနောက်ခံလူ ကာဗာဂျယ်ရဲ့ကန်သွင်းချက် ၃ကြိမ်နဲ့ တိုနီခရူးစ်ရဲ့အဝေးကန်ချက် ၂ကြိမ်အပါအ၀င် ရီးရဲလ်ရဲ့ထိုးဖောက်ကန်သွင်းမှုတွေကို နာဗက်စ် လက်စွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာ တစ်ယောက်တည်း ထိုးဖောက်လာတဲ့ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်မှူး အီကာဒီကို ရီးရဲလ်ဂိုးသမားကော်တွိုက်စ် တားဆီးပုံကြမ်းတမ်းတယ်ဆိုပြီး ကွင်းလယ်ဒိုင်က တိုက်ရိုက်အနီကတ်ပြသခဲ့ပေမယ့် VAR ပြန်ကြည့်ခဲ့ပြီးနောက် အနီကတ်ကနေ အ၀ါကတ်ပြစ်ဒဏ်သာ ပြောင်းလဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
နာပိုလီနဲ့ခနျြပီယံလိဂျပှဲမှာ လီဗာပူးတိုကျစဈမှူး ဆာလာ ပွနျလညျပါဝငျနိုငျတော့မညျ